Image downloaded from http://www.cs.duke.edu/
ခင်ဗျားပြန်ရင်ဘာဖြစ်မှာလည်း...ခဏခဏအမေးခံရတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒီမှာက PhD ပြီးသွားတာနဲ့ တက္ကသိုလ်မှာ သင်ကြားရေးနဲ့သုတေသနအတွက်ပြန်လျှောက်ရင် လက်ထောက်ပါမောက္ခ (Assistant Professor) ဖြစ်ကြပါတယ်။ လခလည်းကောင်းသည်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် သုတေသနဆက်လုပ်ဖို့ တက္ကသိုလ်၊ research center တစ်ခုခုမှာ post-doctorate fellow အနေနဲ့ ပိုမြင့်တဲ့သုတေသနတွေဆက်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဂျပန်ပြည်တွင်းရော၊ ပြည်ပကပါ လိုလိုချင်ချင်လက်ခံကြတယ်။ လခလည်းပိုပိုကောင်းသည်ပေါ့။ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပါမောက္ခစသည်ဖြင့် ဆက်ပြီးလုပ်ချင်သူတွေအတွက် post-doctorate မဖြစ်မနေလိုပါတယ်။ သုတေသနဆက်မလုပ်တော့ဘဲ ကုသရေးကိုဘဲ အားသန်တဲ့သူတွေလည်းဆေးရုံတွေမှာ specialists အနေနဲ့ဝင်ကြတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀လမ်းကြောင်းတိုးတက်မှု career ကရွေးစရာအများကြီးပါဘဲ။
ခုနကအမေးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်အဖြေက..ပြန်ရင် အရင်နေရာအရင်ပို့စ်ဖြစ်တဲ့သင်ကြားရေးဆရာ၊ တက္ကသိုလ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးခန်းမှာဆေးကုတဲ့ဆရာဝန်အဖြစ်ပြန်သွားရမှာ..လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုလိုချင်လို့မရပါဘူး။ ရာထူးတက်ဖို့ဆိုတာလည်းနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာလို သုတေသနစာတမ်းအရေအတွက်၊ အတွေ့အကြုံစတာတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘဲ seniority နဲ့သွားတာဆိုတော့၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်ခွင့်ရတာကိုက မဟာအခွင့်အရေးကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ post-doc တွေဘာတွေလည်းလုပ်ဖို့အခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။
သူတို့က ကျွန်တော်ပြန်ရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲလည်းသိချင်ကြတယ်။ အဖြေကတော့ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့လမ်းဖြစ်တဲ့ ကုသရေးနဲ့ ဒီကုသမှုနည်းလမ်းတွေကို နောင်ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့်လူငယ်တွေကို သင်ကြားဖြန့်ဝေပေးရင်း၊ တက္ကသိုလ်က မာစတာ၊ ဒေါက်တာ ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားဆရာဝန်တွေနဲ့အတူ၊ သူတို့ သုတေသနတွေမှာကူညီသင်ပြပေးရင်း ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့သုတေသနတွေဆက်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းတစ်ခုထဲမှာ အလုပ်သုံးခုတွဲလုပ်နေမယ့်သဘောပါဘဲ။ ဒီလမ်းကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်။ လစာငွေအနေနဲ့မိသားစုဖူလုံအောင် မထောက်ပံ့နိုင်ပေမယ့်၊ ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေအတွက် ကုသရေးနဲ့သုတေသနဘာအရေးကြီးလည်းလို့ မြန်မာပြည်ကတပည့်တစ်ယောက်က မေးလာလို့၊ နှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးကြောင်းပြောပြရပါတယ်။ သုတေသနမပါတဲ့ ကုသမှုက သူများနောက်လိုက်ဘဲဖြစ်နေမယ်။ ပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေတွေ့ရှိနေချိန်မှာ လမ်းရိုးဆေးဟောင်းတွေနဲ့ကုသနေသူတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ သူများက ဒါကောင်းတယ်ပြောလို့ ဟုတ်မဟုတ်မသိဘဲ စမ်းတ၀ါးဝါးသုံးကြည့်နေရသူတွေရှိနိုင်တယ်။ သုတေသနလုပ်ကြည့်မှ ကောင်းမကောင်းမှတ်ကျောက်တင်လို့ရတဲ့ သက်သေပြချက် (evidence) ရလာပြီး၊ လူနာတွေကိုစိတ်ချလက်ချကုပေးနိုင်မယ်။ ဒီခေတ်ကုသမှုတွေကို evidence-based medicine, evidence-based dentistry လို့ခေါ်ပါတယ်။ သက်သေပြချက် (evidence)မရှိဘဲ လက်မခံတော့ပါဘူး။ တခါ ကုသမှုအတွက်လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာအခြေမခံထားတဲ့ သုတေသနတွေကလည်း လူနာကုသမှုအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်သိတာက ကုသရေးလုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရေးဆရာတွေကတော့ ဒီနှစ်မျိုးလုံးကြားမှာ ကြားခံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ သုတေသနတွေကနေတွေ့ရှိလာတဲ့ ရောဂါနဲ့ကုသမှုနည်းလမ်းတွေကို ကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးပြီး တဖက်မှာလည်းလိုအပ်နေတဲ့ကုသမှုနည်းလမ်းဆေးဝါးစတာတွေကို သုတေသနလုပ်မယ့်သူတွေကို လမ်းညွှန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြောသာပြောရတယ်မြန်မာပြည်မှာလုပ်နိုင်တဲ့သုတေသနကလည်း ရှားပါးလှပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်း၊ ပစ္စည်း၊နဲ့ ငွေထောက်ပံ့မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်၊ အလွယ်တကူအဖြေထုတ်နိုင်တဲ့ ရှိတဲ့စက်တွေနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ သုတေသနတွေကိုဘဲ လုပ်နေရပါတယ်။ ဟိုကတက္ကသိုလ်တွေမှာဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားတွေသုတေသနလုပ်ဖို့ အစိုးရက ငွေထောက်ပံ့နိုင်မှုမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ငွေနဲ့စိုက်ပြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ပညာနဲ့လုပ်အားဘဲစိုက်ရတာပါ။ သုတေသနအတွက်ဘတ်ဂျက်က အစိုးရကရော သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပါ ထောက်ပံ့မှုရှိပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာ သုတေသနလုပ်ရင်းပညာသင်နိုင်ဖို့ ငွေရှိတဲ့သူက ပညာသင်ဆုပေးဖို့ခေါ်ပေမယ့် ဟိုကမလွှတ်တော့ပြန်ပါဘူး။ PhD သင်တန်းအတွက် ခွင့်ပြုတဲ့ထဲမှာ သွားဆရာဝန်အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါဘဲ။ နှစ်တိုင်းသစ်လွင်ပွဲမှာမြန်မာပြည်ကလူသစ်များပါမလားမျှော်ခဲ့ပေမယ့်၊ လူရွေးစာမေးပွဲတောင်မလုပ်ပေးတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အနီးအနားက ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ အိန္ဒိယစတာတွေနှစ်တိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကျောင်းကို ဘွဲ့လွန်အတွက်လာကြရပါတယ်။
ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာသင်ခဲ့တာနဲ့မလုံလောက်ဖူးလားလို့မေးကြရင် ဘွဲ့တစ်ဘွဲ့ရတာဟာ အစဘဲရှိပါသေးတယ်။ မာစတာတက်လိုက်ရင်ကိုယ်သင်ခဲ့တဲ့အခြေခံဘွဲ့ဟာအများကြီးလိုနေပါသေးလားလို့သိမြင်လာမယ်။ ပီအိတ်ခ်ျဒီသုတေသနတွေလုပ်လာမှ လူနာတွေအတွက်မလုပ်ပေးနိုင်သေးတာတွေအများကြီးပါလား၊ သုတေသနလုပ်စရာတွေအများကြီး
ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအခြေအနေက တိုးတက်နေရင်တော့ နိုင်ငံခြားမှာတကူးတကပညာထွက်သင်ဖို့၊ လွှတ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့လေ။ အာဏာနဲ့ငွေလက်ကိုင်ရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြားမှာဆေးထွက်ကုကြတာကြည့်ရင် ကိုယ့်အခြေအနေဘယ်လိုဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်တွေဒီနေ့ဒီအခြေအနေရဖို့ ဟိုး..မေဂျီခေတ်ကတည်းက အနောက်နိုင်ငံတွေကိုပညာသင်တွေလွှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ခုထိလည်း အမေရိကစတဲ့ ပိုပြီးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုပညာသင်လွှတ်နေရတုန်းဘဲ။ နောက်ကလိုက်နေရတုန်းပါဘဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကံဆိုးနေခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ခုချိန်မှာအမီလိုက်အောင်စကြိုးစားတောင်မှ နောင်နှစ်၅၀တွင်းမီဖို့မလွယ်သေးပါဘူး။
တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ တစ်လဖြစ်ဖြစ် တစ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာရေးဖြစ်ဖြစ် ပညာသင်ဖြစ်ဖြစ်လာလိုက်ရရင်၊ ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေမြင်သွားမယ်၊ နှစ်ကြာကြာနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပညာသင်တွေအတွက်တော့၊ နည်းပညာတွေ၊ အိုင်ဒီယာတွေပါရလာပြီး၊ ကိုယ့်ဆီမှာပြန်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ရေအိုင်လေးထဲမှာရှိတာနဲ့ကျေနပ်နေသူတွေအတွက် ပင်လယ်ကြီးထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးလေ။ သိတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်တစ်ဦးတစ်ဖွဲ့ကောင်းစားရေးအတ္တအတွက် မသိချင်ဟန်ဆောင်နေကြတယ်လေ။
နောက်၆လကြာရင် ဒီရေအိုင်လေးထဲပြန်သွားရတော့မှာမို့ ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာ ရှားရှားပါးပါးအခွင့်ရတုန်း
ရသလောက် သုတေသနအသစ်တွေလုပ်နေပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေကို အချိန်အားရတာနဲ့ဆက်တင်သွားမှာပါ။
Posted by Dr. Nyan at 11:45 AM
ဦးဥာဏ်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အရမ်းလေးစားမိပါတယ် .....
ဦးဥာဏ်နဲ့ မမ၀ါတို့ မိသားစုလေး ထာဝရ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေ...
အရမ်း မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ ..။
အဲဆို မပြန်နဲ့တော့ ..စင်္ကာပူမှာသွားနေကြမယ်လေ။
အဟီး အလကားပြောတာ. ပြန်မှာ.. ပြန်ဦးမှာ.
မြန်မာပြည်မှာပဲ ပျော်တယ်။ :D
လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ် ဦးဥာဏ် ခင်ဗျာ။
တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူတွေအတွက် နှမြောစရာပဲ။ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲနဲလေးနဲ့ လှောင်ပိတ် မိဦးတော့မှာ။ ပညာတတ်တွေကို
နေရာမှန်ပေးပြီး ဆွေးနွေး အကြံဥဏ်တောင်းတာမျိုး မလုပ်ဘဲ၊ သူတို့သဘော သူတို့အကြိုက်ကို၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စွာ လိုက်လုပ်ရမှာနော်။
မပြန်ရင်ရော ဘာဖြစ်မှာလဲခင်ဗျာ။ သိချင်ယုံ သက်သက်မို့ မေးတာပါ။
ပြန်ဖြစ်အောင်ပြန်ပါ ပညာငတ်နေတဲ့ ပညာလိုခြင်သူတွေကို အသိဥာဏ်ဖွင့်ပေးဖို့ အတွက်လိုအပ်နေပါတယ် အလွန်လေးစားစွာဖြင့်
My respect to you for your decision and dedication. All the best!
အစ်ကို့ရဲ့ ခံယူချက်ကိုတော့ လေးစားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ စိတ်ပဲ ရှိပေမယ့် လူကိုယ်တိုင်တော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးတော့ တကယ် လုပ်နိုင်မယ့် အစ်ကိုတို့လို လူမျိုးတွေ ရှိနေတာကိုပဲ အားကျ ဂုဏ်ယူရပါတယ်။ သုတေသနလုပ်ငန်းတွေ ဆထက်တမ်းပိုး လုပ်နိုင်ပါစေ လို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဖြစ်ပြီး ဦးဥာဏ်ရဲ့စိတ်ဓာတ် နဲ့ စေတနာကိုလည်းအရမ်းကိုလေးစားဂုဏ်ယူမိ
ကျွန်တော်လဲ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်မှာပါ။ အကို့လိုပဲ ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတာက ကျောင်းဆရာလေးတစ်ယောက်ပါ။ သင်ပုန်းကြီးပဲ သင်ရသင်ရ၊ ကျွန်တော်ဆရာပြန်လုပ်ချင်တယ် အကိုရာ။
I always visit your blog and understand the situation .Keep on your good works to our field.
စိတ်ထားကောင်းနဲ့ ဆက်လက်ချီတက်နေတာ ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေ။
လေးစားပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ စင်္ကာပူမှာ ဆုရတာရော ဆရာ့ စိတ်ဓာတ်ကိုရော ချီးကျူးလေးစားပါတယ်ရှင်
အကိုရေ ဘာမှ မပြောချင်လောက်အောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ သားကောင်းရတနာတွေ အတွက် ၀မ်းနဲမိနေပါတယ်။ အောင်မြင်သလောက် မအောင်မြင်တာဟာ ပံ့ပိုးမူတွေ လိုအပ်နေလို့ပါ။ အကိုအအစရာရာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
တကယ်ပညာတတ်တွေလဲ တဖြည်းဖြည်း ရှားပါးလာတာ စဉ်းစားစရာမလိုအောင် အဖြေက ရှင်းနေပါတယ်ဗျာ
ဒီဆရာမျိုးရဲ့ တပည့်ဖြစ်ရမှာ ကျောင်းသားတွေ ကံကောင်းလိုက်တာနော်။
တကယ်တတ်၊ တကယ်ကြိုးစားပြီး တကယ့်စေတနာနဲ့ သင်တဲ့ ဆရာတွေ၊ ပညာရှင်တွေကိုလေးစားပါတယ်..။
ကိုဥာဏ်တို့ ဘ၀က အားရဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အစ်ကို့စိတ်ဓါတ်နဲ့ စေတနာကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင် သမီးလေး အတွက် ဘယ်လို စီစဉ်ထားသလဲ ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် အတော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းမယ်။ မြန်မာပြည်က သူဌေးတွေ ပညာတတ်တွေ သူတို့ ကလေး အနာဂတ်ကို ဘယ်လို မျှော်မှန်း ကြံဆကြသလည်းဆိုတာ ကလေး မိဘတွေ သိထားရင် ကောင်းတယ် ထင်တယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆိုတော့ တောင်းဆိုရတာ အားနာတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် နည်းနည်း ပါးပါး ရေးစေချင်တယ်။ မြန်မာပြည်က အမျိုးတွေ ကလေး မိဘတွေ အတွက်လည်း အသုံးဝင်တာပေါ့။ ကျေးဇူး ကိုဥာဏ်။ မိသားစုလေး ဆက်လက် ပျော်ရွှင်နေဦးမှာပါ။